Maareeyaha Helitaanka Faylka - Bilaabidda - Liiska Faylka fudud
Dulmar guud oo ah tillaabooyinka looga dhigayo Maareeyaha Helitaanka Faylka inuu shaqeeyo.
1) Ku dadaal Maareeyaha Helitaanka Faylka
Hubso in ugu weyn ee Liiska Faylasha Liistada Fidsan ay shaqeyneyso, ka dibna dhaqaaji plugin Helista kordhinta Maamulaha Faylasha. Aad tag Liiska Faylasha Pro menu menu.
2) Xulo Muuqaalka
Waxaad arki doontaa wada hadalkan iyagoo ku weydiinaya nooca nooca aad rabto inaad kuxiriso liiskaaga jira. Halkan guji si aad u sharaxdid noocyada noocyada ah.
Isticmaalayaasha jira, waxaa lagula talinayaa inaad doorato Heer caadi ah hadaadan rabin wax xayiraad gelitaan oo lagu daro waqtigaan. Haddii ay jiraan xiriirro dibadeed oo toos ah faylalka ku jira liiskaaga, ka dib hubi inaad doorato Heer caadi ah.
Isticmaalayaasha cusub, waxaa lagu talinayaa in la xusho Xaalad Xaddidan. Tani waxay hubineysaa in faylashaada xididka la ilaaliyo. Liiska Faylka Guud wuxuu markaa u dhaqmi karaa sida liiska faylka Maamulaha. Marka xigta, samee liisas dheeri ah oo faylal ah oo loogu talagalay dhinaca hore ee boggaaga.
Maamulayaasha, iyo isticmaaleyaasha la siiyay rukhsad, waxay si xor ah ugu guuri karaan faylasha iyo faylalka inta u dhexeysa liistada faylka.
3) Kaydso Xulashadaada
Markaa waxaad arki doontaa galka Ogolaashaha Waxqabadka Faylasha. Hawl kasta waxaad ka doorataa rukhsadahaan:
4) Qeex Meelaha Kale
Hubso inaad dhex marto liistada, Uploading, bandhigay iyo Ogeysiiska tab tab. Xusuusnow, liis kastaa wuxuu leeyahay jaangooyooyin u gaar ah.
Liistada Liiska Liistada faylka
Markaad abuurto liistada faylka, meesha buugga lama baddali karo. Abuur liistada faylka cusub adoo adeegsanaya meesha tusaha cusub.
Xusuusnow liiskaaga hada jira ayaa cinwaan looga dhigay Liiska Faylka Koowaad.
Liisas kasta oo cusub oo la abuuray ayaa adeegsan doona dejinta Liiska Faylka Weyn. Haddii aad u baahato inaad sameysatid liisas badan oo la mid ah, marka hore dejiso habaynta Liiska Faylka Gaarka ah hadba sida loogu baahdo
5) Hel Gawaarida Gawaarida
Si aad ugusoo bandhigto liiska websaydhkaaga, waxaad si fudud ugu dari kartaa liiska Aqoonsiga furaha ah:
Xirmadan gaagaaban ayaa lagusoo bandhigayaa dhinaca midigta sare ee Liiska Maamulaha. Waxa kale oo aad ka heli kartaa moodeegyo gaagaaban adiga oo adeegsanaaya Liistada Liiska iyo Dhismaha Gaaban.
[eeSFL] ayaa soo bandhigi doonta Liiska Faylka ugu weyn
Adeegso tabsyada dejimaha si aad u qeexdo hawlgalka liiska. Hadaad ubaahantahay inaad liiskan dhigato meel dheeri ah, waad isticmaali kartaa Astaamaha Gawaarida inaad ka bad-dejiso dejinta liiska.
6) Meesha Gawaarida la dhigo
Gali guntiga koodh gaagaab kasta Bog, Post ama Widget. Maamule ahaan, waa inaad aragtaa dhammaan xulashooyinka diyaar u ah liisaska oo dhan. Hubso inaad tijaabiso liistada liistada liistada iyo rukhsadaha hawlgalka adoo adeegsanaya galitaan gooni ah.
Hababka Faylasha Liistada ayaa la beddeli karaa wakhti kasta iyadoo la adeegsanayo tabsarka tababbarka, iyo sidoo kale goob kale oo aan ahayn dariiqa buugga.
Intaas baa loo baahan yahay. Ma haysaa wax su'aalo ah?
S: Maxaa dhacaya haddii aan joojiyo faylka loo yaqaan 'Access Access Manager plugin'?
AKaliya Liiska Faylka Koowaad ayaa soo muuqan doona. Miiqado gaagaaban oo adeegsanaya liistada dheeriga ah waxay u muuqan doonaan sida madhan.
S: Maxaa dhacaya haddii adeegsadayaashu ay guji xiriirinta dibedda haddii liiskaygu korka ka sareeyo Caadi?
A: Waqtigaan la joogo, barnaamijyada caadiga ah ee loo yaqaan 'Apache server' isticmaale wuxuu arki doonaa Khalad 403 bog, ama waa Mamnuuc. Haddii tani mushkilad tahay, u beddelo habka liiska mid caadi ah. Abuur liis cusub oo loogu talagalay faylalka gaarka loo leeyahay.
* Adeegsadayaasha kumbuyuutarrada Windows iyo Nginx waxay u baahan yihiin inay qaadaan tillaabooyin dheeri ah si looga hortago isku-xirnaanta tooska ah.
6 fikradood oo ku saabsan "Maareeyaha Helitaanka Faylka - Bilaabidda"
Sebtember 16, 2021 ee 7: 43 AM
Sebtember 16, 2021 ee 10: 23 AM
Maarso 23, 2021 at 10: 38 PM
Galitaanka feylku wuu fiicanyahay waan hubaa laakiin aniga ahaan wuxuu qarinayaa sanduuqa dhajinta dhamaadka hore gebi ahaanba. Waxaan u dhigay kaalinta ugu yar - wax ku biiriyaha wax walbo xitaa ma arki karo sanduuqa!
Maarso 24, 2021 at 1: 22 PM
Salaan Waa kuwan waxyaabo yar oo ay tahay inaad iska ilaaliso:
Marka hore, haddii aad isticmaaleyso nambarro dhowr ah oo hal bog ah, foomka soo dejinta iyo xulashada maareynta faylka ayaa u muuqan doona oo keliya liiska koowaad. Tani waa caadi.
Marka xigta, Maamulayaashu waa inay had iyo jeer awood u yeeshaan inay arkaan dhammaan xulashooyinka marka Maareeyaha Helitaanka Faylka la awoodo. Haddii aadan arkin foomka wax soo rarka, hubi inaadan si xad dhaaf ah u fuulin muuqaalka kore ee habka gaaban. Astaamaha Shortcode waa in loo adeegsadaa oo kaliya in lagu qeexo liiska, galka ama in lagu raaco meelaha ugu muhiimsan marka liiska lagu isticmaalo goobta labaad.
Hubso inaad fiirineyso goobaha saxda ah ee liiska saxda ah. Haddii lambarka gaaban uu qeexayo liiska = ”3 ″, hubi inaad fiirineyso liiskaas dejinta. Tixraac Cinwaanka Liiska iyo / ama guntiga gaaban ee midigta sare ee liiska gadaasha dambe.
Haddii foomka soo dejinta uusan wali muuqan, fiiri bogga isha oo arag haddii nambarka foomka uu halkaas ku yaal. Kaliya raadso "eeSFL_UploadForm" si aad ugu booddid lambarka. Hadday halkaas ku jirto, hubi in wax ku jira CSS-kaaga uusan qarinaynin. Haddii foomka soo dejinta uusan ku jirin koodhka, awood ka saarida oo eeg haddii qaladaad la soo saaray.
Ii sheeg waxa dhaca.
Maarso 18, 2021 at 10: 55 AM
Ma jirtaa waddo aan ku beddelo gelitaanka faylka ee loo diiday bogga wax kale oo aan ahayn farriin dhahaySA QALAD 97: Isticmaalka Isticmaalka Waa La Diiday. Waa inaad gasho si aad uhesho feylashaan, iyo inaad kadhigto bog kale oo aan doortay?
Maarso 18, 2021 at 11: 18 AM
Ma jiro, laakiin taasi waxay u egtahay muuqaal wanaagsan oo lagu daro. Taas ayaan ku dari doonaa liiska waxa la sameeyo. Su'aal: ma waxaad dooneysaa inaad awood u yeelato inaad u rogto dhammaan isku dayga aad ku fashilantay hal bog oo keliya, mise waxaad dooneysaa inaad awood u yeelato inaad u rogto bog kale oo liis kasta ah?